Professional Life or Life Long Learner ? | TechSectors
Professional Life or Life Long Learner ?
1:41 PM LeaveaComment
ကွန်ပျူတာနဲ့ အကျွမ်းတဝင်မရှိတဲ့ သူတွေအတွက် ဘယ်လိုင်းကိုလိုက်ရင် ဘယ်လိုအခွင့်အရေး မျိုးတွေရှိတယ် ဘယ်လို သင်တန်းတွေ တက်ရမယ် ဘာတွေကိုတော့သိထားရမယ် နောက်ဆုံး မင်းဒါတွေ တက်သွားရင် မင်းဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ ..
ကျွန်တော်တို့လို .. ကွန်ပျူတာပိုင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး..နားမလည်သေးတဲ့ သူများအတွက် ... အခုမှစတင်လေ့လာ သူများအတွက် ... ဖိုရမ်မှာ ... ပို ့စ် တစ်ခုအဖြစ် တင်ပေးစေချင်ပါတယ်
ဒီအကြောင်းအရာက အရမ်းကျယ်ပြန့်ပေမယ့် ကျွန်တော် စပြီးဆွေးနွေးကြည့်ပါ့မယ် - ကွန်ပျူတာနည်းပညာထဲကို ၀င်တယ်ဆိုတာ ခေါင်းစဉ်ကွဲ အမျိုးမျိုး ရည်ရွယ်ချက် အမျိုးမျိုး ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာ - တစ်ချို့သူတွေက ကွန်ပြူတာ အသုံးဝင်မှန်း ကြားဖူးပေမယ့် တစ်ခါမှ မသုံးဖူးခဲ့ပဲ အခုမှ ကွန်ပြူတာနဲ့ ထိတွေ့ရမယ့် အခြေအနေကို ရောက်လာတဲ့အခါ ( ကိုယ်ထိတွေ့နေရတဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသေးသုံးလေးတွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ - Software တွေ install လုပ်ဆောင်တာ - Windows တင်တာ - Applications အသစ်လေးတွေကို အသုံးချတာ - ကိုယ်မသိသေးတဲ့ Applications Software တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချတတ်ယုံလောက် လေ့လာတာ - ဟိုပြင် ဒီကလိ ပြင်တာ ကလိတာ မျိုးကို ) ကွန်ပျူတာနည်းပညာ နယ်ပယ်ထဲကို ၀င်တယ်ဆိုပြီး ပြောကြပါတယ်။ တစ်ချို့ကျတော့ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ နယ်ပယ်ထဲကို ဝင်တယ်ဆိုတဲ့ စကားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က အခုကနေ စပြီး ဒီပညာရပ်နဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်မယ် - ဒီပညာရပ်ကို တစိုက်မတ်မတ် လေ့လာမယ် - အသေးစိတ် ပြင်ဆင်မယ် - စနစ်တကျ ချဉ်းကပ်မယ် - နည်းပညာအသစ်တွေ ဖန်တီးမယ် ဆိုပြီး ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီ စကားစုကို သုံးနှုန်းကြပါတယ်။
အဓိပ္ပါယ် ( ၂ ) ရပ်လုံးဟာ ကွန်ပျူတာနည်းပညာနယ်ပယ်ထဲကို ဝင်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ သူချင်း တူတာ မှန်ပေမယ်လို့ လေ့လာရမယ့် အချိန် - ပေးဆပ်ရမယ့် အရင်းအနှီး - ကြိုးပမ်းရမယ့် အားထုတ်မှု - ချဉ်းကပ်ရမယ့် ဘာသာရပ် - အားလုံး ကွဲပြားသွားပါတယ်။ ပထမအဓိပ္ပါယ် ဖြစ်တဲ့ ကွန်ပြူတာကို အသုံးချတတ်ယုံ - အသုံးချနိုင်ယုံ - မိမိလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ အံဝင်ဂွင်ကျယုံ လေ့လာမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်ဟာ ကွန်ပျူတာနည်းပညာ ကို လေ့လာတဲ့ အခါမှာ အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အတတ်အမြန်ဆုံး လေ့လာမှုပါပဲ။ လမ်းညွှန်ပေးမယ့်သူ ပြောပြပေးမယ့်သူသာ ရှိလို့ကတော့ လပိုင်းအတွင်းကို ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ ( ကိုယ်ထိတွေ့နေရတဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသေးသုံးလေးတွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ - Software တွေ install လုပ်ဆောင်တာ - Windows တင်တာ - Applications အသစ်လေးတွေကို အသုံးချတာ - ကိုယ်မသိသေးတဲ့ Applications Software တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချတတ်ယုံလောက် လေ့လာတာ - ဟိုပြင်ဒီကလိ ပြင်တာ ကလိတာ မျိုး ) ဆိုတာတွေ အားလုံးတတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေ တတ်မြောက်ထားရင် နည်းပညာနောက်ကျနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ သာမာန် Service center လောက်မှာ ဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်လို့ ရကောင်းရနိုင်ပေမယ့် - နိုင်ငံတကာမှာ အလုပ်သွားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလောက်အတွေ့အကြုံနဲ့ ဘယ်သူမှ အလုပ်မခန့်ပါဘူး -
အခု ဒုတိယအဓိပ္ပါယ် ကိုရောက်ပါပြီ - နိုင်ငံတကာမှာ သွားပြီး အလုပ်လုပ်မယ် - လစာကောင်းကောင်းလည်း ရချင်တယ် - ရတဲ့ အလုပ်ကလည်း မပြုတ်ချင်ဘူး - လူတိုင်းရဲ့ အထင်ကြီးလေးစားမှုကို ခံချင်တယ် - ဒီလိုဆိုရင်တော့ ကွန်ပျူတာ နယ်ပယ်ထဲကို ဝင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကို သုံးနှုန်းလိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဟာ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ( ကိုယ်ထိတွေ့နေရတဲ့ ကွန်ပြူတာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အသေးသုံးလေးတွေ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ - Software တွေ install လုပ်ဆောင်တာ - Windows တင်တာ - Applications အသစ်လေးတွေကို အသုံးချတာ - ကိုယ်မသိသေးတဲ့ Applications Software တွေကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချတတ်ယုံလောက် လေ့လာတာ - ဟိုပြင်ဒီကလိ ပြင်တာ ကလိတာ မျိုး ) နဲ့တင် မလုံလောက်တော့ပါဘူး - ကွန်ပြူတာနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ နည်းပညာ အသစ်သစ်တွေကို ဖန်တီးနိုင်ရမယ် - မဖန်တီးနိုင်ရင်တောင် ပုံစံတူလောက်တော့ တုနိုင်ရမယ် - Error တွေကို စစ်ဆေး အဖြေရှာပေးနိုင်ရမယ် - ဒါမျိုး အရည်အချင်းတွေ ရှိဖို့လိုပါတယ်။
ကွန်ပျူတာနယ်ပယ်ထဲကို ဝင်မယ်ဆိုတဲ့စကားကို သုံးနှုန်းလိုက်တဲ့ လူနှစ်မျိုး နှစ်စားကို ယှဉ်လိုက်ရင် အဲ့ဒီမှာတင် တော်တော် ကွာခြားသွားပါပြီ - ကွန်ပြူတာပညာကို လိုအပ်သလောက်ပဲ လေ့လာမယ့် သူဆိုတာ အချိန်ပေးရလည်း သက်သာသလို ငွေကုန်ကြေးကျလည်း နည်းပါတယ်။ အများကြီးလည်း အားထုတ်ဖို့ မလိုသလို လေ့လာရမယ့် ဘာသာရပ်လည်း မများဘူး - သူ့ရဲ့ အားသာချက်က ကိုယ့်စက်လေး ကိုယ့်ဘာသာ အဆင်ပြေပြေ သုံးတတ်တယ် - Error တတ်ရင် သူများဆီသွားပြီး အပူတပြင်း အကူအညီတောင်းစရာ မလိုဘူး - ဟိုကလိ ဒီကလိ လောက်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ပြင်တတ်မယ် - အသေးအဖွဲ ပျက်တာလေးတွေ အတွက် ဘယ် Error ကြောင့်ဆိုတာ အနည်းအကျဉ်း အဖြေရှာတတ်မယ် - လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ applications တွေကို ကိုယ်က ကောင်းကောင်း အသုံးချတတ်လို့ လုပ်ငန်းပိုင်း ဆိုင်ရာ အစဉ်ပြေပြေ ချောချောမွေ့မွေ့နဲ့ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ် - ဒါက ကောင်းချက်လေးတွေပါ - ဒီလိုလေ့လာမှုမျိုးကို ဘယ်လိုလူတွေ လိုအပ်လဲ ဆိုရင် Computer နည်းပညာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ကိုင် စားသောက်မှာ မဟုတ်တဲ့ လူတိုင်း ဒီ အခြေခံအဆင့်တွေ တတ်မြောက်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဥပမာပြောရရင် Physician သို့မဟုတ် Surgery တစ်ယောက်က Programming ပိုင်း မတတ်လည်း ဘာမှ မဖြစ်ဘူး - ဒါက သူ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး - Networking ပိုင်း မရလို့လည်း ဘာမှ မဖြစ်ဘူး - သူလေ့လာရမယ့် ဘာသာမဟုတ်ဘူး - လုပ်ငန်းခွင်က Civil Engineer တစ်ယောက်က Game program မရေးတတ်ဘူး - ဘာဖြစ်လဲ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး - ကျွန်တော်ဆိုလိုတာ အဲလို လူမျိုးတွေက ကိုယ့်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပညာရပ်ကို အထောက်အပံ့ဖြစ်ယုံလောက်ပဲ ကွန်ပြူတာပညာဆိုတာ လေ့လာလို့ရတယ် - Specialize အနေနဲ့ လေ့လာဖို့ မလိုဘူး - Specialize လေ့လာတယ်ဆိုတာ ဒီကွန်ပြူတာနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပြုမယ့် သူတွေ လေ့လာရမယ့် အလုပ် -
မြန်မာနိုင်ငံက လူငယ်တော်တော်များများက ဒီ ကွာခြားချက်ကို နားမလည်ကြဘူး - Programmer ကြီး - Game developer ကြီး တွေတွေ့ပြီဆိုရင် ကိုယ်ရထားတဲ့ ဘွဲ့ - ကိုယ်လုပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းကို မေ့ပြီး နေရင်းထိုင်ရင်း Programmer တွေ Web designer ဆိုတာတွေ ဖြစ်ချင်သွားကြတယ် - တစ်ဖက်သားကို အားကျတဲ့ စိတ်ကကောင်းတာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ရပ်တည်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ ကိုယ်စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ ဘဝက ဖြစ်နိုင်ချေရှိသလားဆိုပြီး ပြန်စမ်းစစ်ဖို့ လိုပါတယ်။ Programmer တွေ Web designer တွေ Game developer တြွေဖစ်ဖို့ဆိုတာ အပြောသာလွယ်တာ တကယ်တမ်း ဖြစ်နေတဲ့ သူတွေကို မေးကြည့်ပါ လွယ်သလားလို့ - သူတို့ ခုလို Programmer တွေ Web designer တွေ Game developer တြွေဖစ်လာဖို့ ပေးခဲ့ရတဲ့ အချိန် - ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ အရင်းအနှီး - ကြိုးပမ်းခဲ့ရတဲ့ အားထုတ်မှု - လေ့လာခဲ့ရတဲ့ ဘာသာရပ် ဆိုတာ တော်တော်ကို များတာပါ - သူတို့အဲလို အချိန် - ငွေ - အားထုတ်မှုတွေနဲ့ ရင်းနှီးပြီးမှ ရလာခဲ့တဲ့ နေရာတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့တွေက ဗြုန်းဒိုင်းဆို နေ့ချင်းညချင်း ရောက်သွားဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား ?? သေချာတာကတော့ ဖြတ်လမ်းကနေ လိုက်ပြီး Programmer မဖြစ်နိုင်ဘူး Web designer မဖြစ်နိုင်ဘူး Game developer မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ဒါကိုနားမလည်ကြတဲ့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာလူငယ်တွေက ရေလိုက်လွဲနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ သူများ က ကွန်ပြူတာဆို လိုက်ကွန်ပြူတာ - Basic သင်တန်းတက်မယ်ဟေ့ ဆို Basic Basic နဲ့ စတက်လိုက်ကြ - နောက်တစ်ယောက် Hardware - Hardware ဆို Hardware သင်တန်းနောက် ပြေးလိုက်လိုက်ကြ - Web Design - Web Design ဆို Web Design နောက်ရောက်သွားရပြန် နဲ့ သူတို့ဘာကြောင့် ဒီသင်တန်းတွေ တက်နေမှန်း - ဒီသင်တန်းတွေက ဘယ်နေရာမှာ အသုံးဝင်မှန်းလည်း သူတို့ ကောင်းကောင်း မသိကြသလို - သိခဲ့သည်ပဲထားဦး တကယ်ရော ကိုယ့်အတွက် အသုံးလိုရဲ့လား ဆိုတာ မပိုင်းဖြတ်နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါဟာ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုရင် ကွန်ပြူတာဆိုတာ လေ့လာရမယ် ဆိုတာပဲ သိပြီး ဘယ်လို လေ့လာရမယ်ဆိုတာ မသိလို့ ဖြစ်နေကြတာပါ။ ဒါက လူငယ်တွေ အပြစ်မဟုတ်ပါဘူး - မျိုးဆက်သစ်ကို လက်တွဲမခေါ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အပြစ်ပါ။
ကျွန်တော့် စာလည်း ရှည်ပြီ - ကျွန်တော့်ဆွေးနွေးချက်ကို အနှစ်ချုပ်ချင်တာကတော့ ကွန်ပျူတာနယ်ပယ်ထဲကို ဝင်မယ်ဆိုတာ မှန်တယ် - ဘာလုပ်ချင်တာလဲ ?? ဘယ်နေရာမှာ အသုံးချချင်တာလဲ ?? ဆိုလိုတာ ဒီ ကွန်ပြူတာနယ်ပယ်ထဲမှာပဲ ရပ်တည်မှီခိုပြီး ဘဝရပ်တည်ရေးကို ဖြတ်သန်းချင်တာလား ( ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်မှာလား ?? ) ဒါမှမဟုတ် မိမိလက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေရတဲ့ လုပ်ငန်းမြန်ဆန်ချောမွေ့စေရေးအတွက် ရိုးရိုးသာမာန် ကွန်ပြူတာ users တစ်ယောက်လို ကွန်ပြူတာ အကြောင်းကို သိနားလည်ထားချင် - အသုံးပြုတတ်ချင်တာလား ?? ဒီမေးခွန်းတွေကို အရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သေသေချာချာ ဖြေကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီအဖြေတွေရဲ့ ကွာခြားချက်ကို လိုက်ပြီး နောက်မှာ လျှောက်လှမ်းရမယ့် လမ်းစဉ် - ခံယူရမယ့် ခံယူချက် အားလုံး ပြောင်းလဲ သွားပါလိမ့်မယ်။
ကွန်ပျူတာနယ်ပယ်ထဲကို ဝင်မယ် - လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်မှာ ရည်မှန်းချက် ခိုင်မာဖို့ နဲ့ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုင်းကို လိုက်ရမလဲ - ဘယ်သင်တန်းတွေ တက်ရမလဲ ဆိုတာ အရင်ဆုံး မစဉ်းစားပါနဲ့ဦး - ဘာအတွက် သုံးမှာလဲ ဆိုတာကို အရင်စဉ်းစားပါ - ဘဝရပ်တည်မှု အတွက်လား - လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက် အတွက်လား ??
ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်တဲ့ သူဟာ ဆုံးဖြတ်ချက် နောက်ကျခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ရွေးချယ်မှုကို အမှားမှားအယွင်းယွင်းနဲ့ အစောတလျင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး မိမိရှေ့မှာ ရောက်နှင့်နေသူတွေထက် အောင်မြင်မှုရဖို့ % ပိုများပါတယ်။ သူများအောင်မြင် တာကြည့် - သူများတိုးတက်တာကို အားကျပြီး သူ့လိုလိုက်မလုပ်နိုင်ဘဲ ဘယ်လမ်းက ချောင်မလဲ - ဘယ်ဖြတ်လမ်းကလိုက်ရင် ငါ အမြန်ဆုံး သိသွားနိုင်မလဲ ဆိုပြီး ရွေးချယ်နေရင် လမ်းမှန်မရောက်ပဲ လမ်းလယ်မှာ တစ်ဝဲလည်လည် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ဒီအောက်က ပုံလေးက ဆရာအော်ပီကျယ် ရေးတဲ့ ကျကျမ်းထဲက အပိုင်းလေး တစ်ပိုင်းပါ။
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးသွားတာတွေက ကိုအာကာအောင်တို့ ကိုသီဟန်စိုးတို့ မေးတာနဲ့တော့ တည့်ကြီး သက်ဆိုင်မှု မရှိသေးပါဘူး - ဒါပေမယ့် ဒါက အခြေခံပါပဲ - ဒီခံယူချက်တွေရဲ့နောက်မှာ ကွန်ပြူတာနည်းပညာနယ်ပယ်ထဲကို ရောက်နေတဲ့ ငါ့အတွက် ဘယ်လောက်ထိ လေ့လာဖို့လိုမလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေကို တွေ့လာလိမ့် မယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
FAQs How to Sectors
Configuration the Dropbox Folder
How to use the internet effectively !
CRC failed Error
Increase Your Laptop's Battery Life
Kaspersky 2011 Offline Updates
Simple Compiz Config Settings Manager
Get Your Windows7Drivers
Ubuntu Error and Compiz help
Don't bother me plz
Create your own Proxy server !
FIFA World Cup & Stadium Maps
Shakira + MM Girl
Network Configuration in Ubuntu 10.04 LTS
Never say like that !
Wanna create ur own design ??
New Google Search Homepage
Transforms Ubuntu to Windows 7